बदाम Almond बारे केहि रोचक स्वास्थ्य सम्बन्धि तथ्य: रक्तचाप नियन्त्रण - Eall Nepal
Homeआहार विहारबदाम Almond बारे केहि रोचक स्वास्थ्य सम्बन्धि तथ्य: रक्तचाप नियन्त्रण
बदामको कोलेस्ट्रोल विनियमन (Cholesterol Regulation) नै सबैभन्दा प्रख्यात फाइदा हो ! बदामलाइ दैनिक सेवनपनि गर्न सकिन्छ ! प्रतिदिन २२ देखि २४ सम्म बदाम सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ! अनेक सोधहरु द्वारा थाहा भए अनुसार दैनिक बदामको सेवन गर्दा मोटोपनमा कमि आउने पाइएको छ ! तर काचो बदामको सेवन गर्दा टायफाइड हुन भने सक्छ त्यसैले सँधै भुटेको बदाम नुन सँग मिलाएर सेवन गर्दा उचित हुन्छ ! बदामलाइ सधैँ बेलुका पानीमा भिजाएर अर्को दिन विहान खाली पेटमा सेवन गर्दा धेरै रोगहरु सँग लड्ने क्षमता प्रदान गर्दछ !
बदाममा पूर्ण protein, fiber, calcium, magnesium, potassium, Copper, vitamin E र antioxidants हरु पाइन्छन्.
बदामका केहि महत्वपूर्ण फाइदाहरु: मस्तिस्कको विकाश: बदाम यो बच्चाहरु को विकाश अत्यत्नै राम्रो खान पनि हो . मुटुको लागि उत्तम: बदामले मोटोपन नियन्त्रण गर्ने भएकाले र यसमा भिटामिन ई प्रसस्तै पाइने भएकाले मुटुरोग को खतरा अत्यान्तै कमि हुन्छ !
– छालाको संरक्षण – रक्तचाप नियन्त्रण -क्यान्सरबाट रोकथाम – मधुमेह बिरुद्ध संरक्षण – गर्भावस्थाको लागि उचित – तौलमा कमि – कब्जियत रोगको रोकठाम